सामाजिक मिडिया नेभिगेट गर्नका लागि एक क्षेत्र गाइड Martech Zone
सामाजिक मिडिया नेभिगेट गर्नका लागि एक क्षेत्र गाईड
सोमबार, जनवरी 6, 2014 आइतवार, जनवरी २,, २०१। Douglas Karr
लेमनलीबाट यो इन्फोग्राफिक र9क्लोउडहरूले अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ कसरी सामाजिक मिडिया नेभिगेट गर्न धेरै अनौंठो छ। लक्ष्य भनेको cl क्लाउडहरूले सँधै प्राप्त गरेको तीन प्रश्नहरूको उत्तर दिन स्पष्ट तस्वीर रंगाउनु थियो - कुन नेटवर्कहरू मैले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ? मैले किन पिन्टेरेस्ट वा गुगल प्लस वा [नेटवर्क सम्मिलित गर्नुहोस्] प्रयोग गर्ने? मेरो नेटवर्कको लागि कुन नेटवर्क उत्तम छ?
सामाजिक मिडिया इन्फोग्राफिकले कुञ्जी तथ्या .्क, लक्षित बजार, दर्शकहरू र प्रत्येक नेटवर्कको लागि समय प्रतिबद्धता समावेश गर्दछ। यदि तपाईंसँग केहि मिनेटहरू छन् भने पनि, यो टुक्रा तपाईंलाई नेटवर्कहरूको राम्रो सिंहावलोकन दिनेछ र के ती तपाईंको लागि उपयुक्त छन् / तपाईंको समयको लायक छ।
Cloud बादलहरू सुरू हुँदैछ नेभिगेट सामाजिक मिडिया: एक क्षेत्र गाइड। इन्फोग्राफिकले नेटवर्कलाई हाइलाइट गर्दछ जुन पुस्तकमा चित्रित हुनेछन् र तपाईंलाई पुस्तक सामग्रीको केही भागमा झलक दिन्छ।
टैग:9क्लाउडफेसबुकक्षेत्र गाईडगुगल प्लसGoogle +नीबूलेLinkedInसामाजिक मिडिया नेभिगेट गर्दैPinterestसामाजिक संजालtwitterYouTube
फ्रान्चाइज मार्केटिंग समूह
जनवरी 6, 2014 मा 11: 45 एएम
प्रत्येक सामाजिक मिडियाको प्रयोगको लागि तपाईंको तथ्या .्क देखाउँदा कस्तो रमाईलो इन्फोग्राफ। पक्का गर्न यो अधिक अध्ययन गर्न जाँदै।